Madweynaha Kyrgyzstan ayaa ku dhawaaqay inuu diyaar u yahay inuu is casilo isla marka la… – Hagaag.com
Madweynaha Kyrgyzstan ayaa ku dhawaaqay inuu diyaar u yahay inuu is casilo isla marka la…
Posted on 9 Oktoobar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Madaxweynaha dalka Kyrgyzstan, Surunbay Genbekov, ayaa ku dhawaaqay Jimcaha maanta inuu “diyaar u yahay inuu is casilo” isla marka la soo magacaabo xukuumad cusub, iskuday lagu doonayo in lagu soo afjaro qalalaasaha siyaasadeed ee dalkan yar ee Bartamaha Aasiya goobjooga u ahaa ilaa toddobaad, ka dib doorashadii muranka dhalisay ee sharci dejinta.
“Waxaan diyaar u ahay inaan ka tago jagada Madaxweynaha Jamhuuriyadda Kyrgyzstan” isla marka la helo dowlad cusub oo sharci ah “waxaan ku laabaneynaa wadadii sharciga,” Genbekov ayaa ku yiri hadal uu ku daabacay horraantii Jimcaha boggiisa.
Wuxuu intaas ku daray in is casilaada ay dhici karto mar la cayimay waqtiga doorashada cusub iyo isbadal lagu sameeyay dowlada. Si kastaba ha noqotee, ma cadda in shuruudahaas la dabooli karo, xilli banaanbaxyo cusub la qorsheynayo Jimcaha, taas oo kordhinaysa halista iska horimaadyada rabshadaha wata.
Stephan Dujarric oo ah afhayeenka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa dhankiisa muujiyay sida ay hay’ada caalamiga ah uga walaacsan tahay xaalada Kyrgyzstan.
Dujarric wuxuu carrabka ku adkeeyay in Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha-Guud ee Bartamaha Aasiya, Natalia German, ay si dhow ula socoto xaaladda, iyo inay xiriir la leedahay madaxda ugu sarreysa dalka si ay u hesho siyaabaha ay gacan uga geysan karaan xal nabadeed.